फूल फुलेरै केभो? फुल्नुको अर्थ छैन भने! – Complete Nepali News Portal
फूल फुलेरै केभो? फुल्नुको अर्थ छैन भने!
पन्त लेख्नु हुन्छ :
जून उदाएरै केभो? उज्यालो छर्न सक्दैन भने!
मानब भएर केभो? मानबता लाइ बुझ्दैन भने!
जीबन पाएर केभो? जिउनु को सारनै छैन भने!
आफु मात्र बाचेर केभो? अरुले बाच्न पाउदैन भने!
आफु मात्र हासेर केभो? अरुले हास्न पाउदैन भने!
धर्म मानेर केभो? मानबिय कर्म गर्दैन भने!
भगवान लाइ मानेर केभो? मान्छे लाइनै मान्दैन भने!
ठुलो मान्छे भएर केभो? अरुको भावना बुझ्दैन भने!
सर्ब-सम्पन्न भएर केभो? सबैलाई सामान देख्दैन भने!
बिद्द्वान भएर केभो? भित्रि ज्ञान आउदैन भने!
जन्मेर मात्र केभो? अरुको उपकार गर्दैन भने!
धन्यबाद, सबैमा शुभ दिनको कामना
म मन्दिर हु मायाको कसैले तोडेर केभो? म एक्लै छु...